Juventus Oo U Baxday Finalka Champions Leaque-ga, Alvaro Morata Oo Markale Real Madrid Ugaadhsaday, Xili Juventus Ay Santiago Bernabeu Barbaro Kula Gashay Real Madrid
Juventus Oo U Baxday Finalka Champions Leaque-ga, Alvaro Morata Oo Markale Real Madrid Ugaadhsaday, Xili Juventus Ay Santiago Bernabeu Barbaro Kula Gashay Real Madrid 0 May 14, 2015 in Wararka by Staff SLL Media Visits: 585
Juventus Oo U Baxday Finalka Champions Leaque-ga, Alvaro Morata Oo Markale Real Madrid Ugaadhsaday, Xili Juventus Ay Santiago Bernabeu Barbaro Kula Gashay Real Madrid Kooxda Juventus ayaa u soo baxday finalka Champions Leaque-ga xili ciyaareekan 2014/15, waxayna kooxda ree Talyaani finalka Champions Leaque la ciyaari doonta kooxda Barcelona oo xalay u sii baxday finalka Berlin. Juventus ayaa santiago Bernabeu ku reebtay kooxdii koobka Champions Leaque-ga difaacanaysay ee Real Madrid.
Inkasta oo ay Real Madrid gool ku hormartay qaybtii hore ee ciyaarta ayay haddan Juventus goolka barbaraha la timid qaybtii danbe, waxaana Real Madrid dhibta u soo jiiday dhaawicii hore ugu soo gaadhay Juventus Stadium. Gool uu Ronlado dhaliyay oo Real Madrid u horseedi lahaa finalka ayuu Morata waxba kama jiraan ka dhigay, waxaana markale Real Madrid gudhaadsaday hubkoodii ay Juventus ka iibiyeen.Juventus ayaa ku soo baxday celcelis ahaan 3:2 ah.
Waxaa Bernabeu loogu balansanaa in la soo gabagabeeyo wareega afar dhamaadka Champions Leaque-ga, waxaana kulanka ugu danbeeyay Santiago Bernabeu ku kulmay kooxda Real Madrid iyo Juventus, kuwaas oo doonayay inay finalka Champions Leaque-ga Berlin kula ciyaari lahyd Barcelona oo iyadu xalay tikidhka u goosatay Berlin.
Casillas ayaa kulankiisii 150 aad ee Champions Leaque-ga shaxda Madrid ku bilawday, wuxuuna barbareeyay Xavi Hernandez oo isaguna xalay tiradan gaadhay, waana labada ciyaartoy ee abid ugu safasha dabadan Champions Leaque-ga.
Real Madrid ayaa kooxda Juventus soo dhawaysay iyada oo doonaysay inay dhinaca kale u dhigto guuldaradii 2:1 ahayd ee todobaadkii hore ku soo gaadhay Turin, waxayna kooxda Ancelotti doonaysay inay soo Juventus dhinaca iskaga dhigto.Carlo Ancelotti iyo Allegri oo ah tababarayaal si fiican isku fahmaya ayuu midkastaaba qorshihiisa ciyaarta soo diyaarsaday.
Jamaahiirta Real Madrid ayaa garoonka si cajiib ah u soo buuux dhaafiyay iyaga oo saacado ka hor kulanka si wayn oo aan caadi ahayn u soo dhaweeyay buska ay saarnayeen ciyaartoyda Real Madrid.Jamaahiirta Los Blancos ayaa diyaar u ahaa inay kooxdooda ka caawiyaan inay dhagaha kaga qaylyaan Juventus si ay saamayn ugu yeeshaanc iyaarta.
Kulankan ayaa ahaa mid xiiso badan oo ay labada kooxoodba si wayn ugu soo diyaar garoobeen, waxayna labada koodoodba sidoo kale doonayeen inay u soo baxaan finalka Champions Leaque-ga. Ciyaarta ayaana ku bilaabatay qaab xamaasad wayni ku dheehan tahay.
Fursada ugu halista badanayd ayay Juventus daqiiqadii 14 aad heshay waxaana kubbad halis ah goolka Real Madrid ku darbeeyay Arturo Vidal laakiin Casillas ayaa jawaab fiican ka bixiyay.Laakiin intaa wixii ka danbaysay ayay Real Madrid bilawday weerar aan loo kala hadhin kaas oo dhibaato badan ku abuuray difaaca Juventus.Real Madrid ayaa bilawday silsilada weerar ah iyo fursado tiro badan, taas oo ugu danbayn daqiiqadii 23 aad keentay in Juventus ay culayska hayn kari waydo isla markaana ay qalad rekoodhe keenay ku gasho James Rodriguez.
Chiellini ayaa qalad ku galay james oo xerada ganaaxa Juventus ku jiray laakiin halkan ayuu muran badani ka dhashay iyada oo garsooraha ree Sweden ee kulankan hayay uu rekoodhe tilmaamay, go’aanlka uu garsoore J. Eriksson rekoodhaha ku tilmaamay ayaa ahaa mid aad loo dhaliilay, waxaana si wayn uga cadhooday ciyaartoyda Juventus.
Cristiano Ronlado ayaa kubbada qaatay isla markaana isku diyaariyay inuu kooxdiisa hogaanka ugu dhiibo hadiyada rekoodhaha ah ee ay heshay, wuxuuna Ronaldo rekoodhihii u sarifay gool, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Real Madrid hogaanka kula wareegtay. Natiijada celcelis ahaanta ah ayaa noqotay 2:2 ay Real Madrid ku soo baxayso.
Goolkan ayaa ahaa goolkii 10 aad ee uu Ronaldo xili ciyaareedkan ka dhaliyo Champions Leaque-ga, wuxuuna la goolal noqday Lionel Messi oo gool dhalinta Champions Leaque-ga hogaanka u hayay. Sidoo kale goolkan ayaa ahaa goolkii 77 aad ee uu Ronlado abid ka dhaliyo Champions Leaque-ga wuxuuna markale barbareeyey rekoodhka abid ee gool dhalinta Champions Leaque-ga oo uu iyadana Messi hayay.
Cristiano Ronlado iyo Karim Benzema ayaa ahaa labada ciyaartoy ee weerarka deg deg ah sida ugu fiican iskula haystay ee dhibaatada ugu badan ku abuuray difaaca Juventus, waxayna Benzema iyo Ronlado heleen fursado halis ah.Gaar ahaan Ronlado ayaa fursado halis ah laga badbaadiyay taas oo keentay inuu birta dhirbaaxo la dhaco oo aad uga xumaado.
Real Madrid ayaa markii ay goolka la timid bilawday inay difaaca xidhato isla markaana ay weerar deg deg ah qaado halka jamaahiirta Real Madrid ay iyaguna bilaabeen inay kubbada soo celin waayaan marka ay garoonka ka baxdo, waxaanad sawirkan ka fahmi kartaa dhibata Evra ka haysata inuu kubbada dib u helo.
Real Madrid ayaa qaybta hore ee ciyaarta ayay Real Madrid ahayd kooxda ugu cad cad isla markaana daqiiad kasta gool laga filanayay, waxayna Madrid u muuqatay inay heshay dariiqii ay Juventus kaga talaabsan lahayd. Kooxda ree Talyaani ayaana fursado fiican abuurin laakiin waxay ugu yaraan ku guulaysteen inay shabaqooda ka ilaaliyaan wax hal gool ka badan.
Waxaana qaybta hore ee ciyaarta labada kooxood udhexeeyay goolka rekoodhaha ahaa ee James lagu galay laakiin markale ayaa James kaadhka digniinta ah lagu siiyay inuu istuuray si uu rekoodhe ugu guulaysto. qaybta hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1:0 ay Real Madrid hogaanka ciyaarta ugu haysay.
Markii layskugu soo laabatay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay markale haddana ciyaartu ku bilaabatay dardar iyada oo labada kooxoodba ay fursado abuureen. Marchisio ayaa fursad hore helay laakiin kubbad gantaal ah oo uu tuuray ayaa goolka Casillas garab martay halka uu wax yar kadibna Marcelo sidaas oo kale sameeyay.Real Madrid ayaana bilawday inay difaacato natiijada ay ku soo bixi karaysay.
Laakiin Juventus ayaa dagaal u gashay inay weerar ku qaado Real Madrid, waxayna waqti kooban ku heleen fursada ay ciyaarta ku barbareeyeen, waxaana daqiiqadii 57 aad markale kooxdiisii hore ugaadhsaday Alvaro Morata oo gool qurux badan markale Casills ka dhaliyay, wuxuuna markiisa ciyaarta ka dhigay barbaro 1:1 ah, laakiin natiijada celcelis ahaanta ah ayaa noqotay 3:2 ay Juventus ku gacanta sare ku leedhay.
Kubbad ku meeraysatay xerada ganaaxa Real Madrid ayuu si fiican u madax ugu soo celiyay Pual Pogba, waxaana si fiican xerada ganaaxa Real Madrid kubbada ugu dhex maamushay Morata kaas oo kubbad dab ah ku darbeeya Casillas taas oo si fiican shabaqa u lushay.Daqiiadii 70 aad ayay Juventus heshay fursad ay ciyaarta ku dili lahayd, waxaana kubbad hal ka hal ah Casillas kula soo baxay Marchisio kadib markii uu Vidal kubbad cajiib ah u siidaayay, laakiin Casillas ayaa markan sameeyay badbaadin fantastik ah oo kooxdiisa Real Madrid ka badbaadisay inay dhulka ku dhacdo.
Juventus ayaa markii ay goolka heshay kalsooni badan heshay waxayna bilawday inay difaacato natiijada markan dhinaceeda u soo wareegtay.Juventus ayaa si fiican iskaga difaacday weeerar badan oo ay Real Madrid soo qaaday markii goolka looga hormaray.
Haddii ay Real Madrid ahayd qaybtii hore kooxda waxkasta ku fiicnayd ayay markeeda Juventus qaybtii danbe ee ciyaarta ahayd kooxda wax kasta ku fiican haddii ay fursadaha halista ah tahay iyo haddii ay difaac tahayba. Daqiiqadii 88 aad markale ciyaarta hurdada u diri gaadhay Pual Pogba kaas oo isaga oo xerada ganaaxa Madrid ku jira ayuu kubbad halis ah ah ku tarbeeyay goolka laakiin Casillas ayaa markale muujiyay inuu diyaar yahay.
Ugu danbayn Juventus ayaa iska xaadirisay finalka Champions Champions Leaque-ga, waxayna garoonkeeda ku reebtay kooxda koobka horyaalka Yurub difaacanaysay ee Real Madrid, waxaana halkaa ku dhamaatay rajadii iyo hamigii Real Madrid ee ahaa inay noqoto kooxdii abid ugu horaysay ee Champions Leaque-ga laba xili ciyaareed oo isku xigta ku guulaysata. Juventus ayaana sidaa balan cad kaga samaysatay Barcelona oo iyaduna xalay Berlin iyo finalka Champions Leaque-ga u baxday.
Badhasaabka Gobolka Awdal oo fariin caafimaad la wadaagay Bulshada Somaliland Xili cudurka Shuban biyoodku dad badan ku laayay deegaano kala duwan oo somaliland ah
11/04/2017 - 19:50:34